Abenzi Bezifo Ezithathelwanayo nabahlinzeki - China Ifektri yezifo Ezithathelwanayo
Ukuhlolwa kwe-HSV 12 Antigen
ISINGENISO I-HSV yisimvilophu, igciwane le-DNA-comtaining virus morphologically elifana namanye amalungu ohlobo lwe-Herpesviridae.Izinhlobo ezimbili ezihlukaniswe ngokwehlukana ziyaziwa, uhlobo oluqokiwe 1 nohlobo 2. Uhlobo lwe-HSV 1 no-2 luvame ukubandakanyeka ekuthelelekeni okungenhla komlomo womlomo , kubonakala isikhumba, iso kanye nesitho sangasese, Ukutheleleka kwesistimu yezinzwa emaphakathi (i-meningoencephalitis) kanye nokutheleleka okunzima okujwayelekile ku-neonate yesiguli esine-immunocompromised nakho kuyabonakala, kepha mo ...
Isivivinyo esisheshayo seStrongStep® Neisseria gonorrhoeae Antigen yindlela esheshayo yokugeleza kwe-lateral yokuthola ukutholakala kokuqashelwa kwekhwalithi ye-Neisseria gonorrhoeae antigen e-urethral nowesifazane wesibeletho somlomo wesibeletho. Izinzuzo Ukuqonda okuphezulu okuphezulu (97.5%) kanye nokucaciswa okuphezulu (97.4%) ngokwemiphumela yamacala ayi-1086 wokuhlolwa kwemitholampilo. Kushesha kuphela imizuzu engu-15 edingekayo. Inqubo yesinyathelo esisodwa yokusebenziseka kalula ukuthola i-antigen ngqo. Akunazinsiza kusebenza Izibhedlela ezikhawulela umthombo noma imitholampilo ...
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Test Device i-immunoassay ebonakalayo esheshayo yokutholwa kokuqagela okufanelekile kwe-HPV 16/18 E6 & E7 oncoprotein kuma-specimens wesifazane wesibeletho somlomo wesibeletho. Leli khithi kuhloswe ngalo ukuthi lisetshenziswe njengosizo ekutholeni iCancer Pre-cancer kanye neCancer. ISINGENISO Emazweni asathuthuka, umdlavuza wesibeletho uyimbangela ehamba phambili yokufa kwabantu besifazane okuhlobene nomdlavuza, ngenxa yokungabi bikho kokuqaliswa kokuhlolwa kokuhlolwa komdlavuza wangaphambi komdlavuza ...
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE I-StrongStep® Strep A Rapid Test Device iyisivikelo esisheshayo sokutholwa kwekhwalithi ye-antigen ye-Group A Streptococcal (Group A Strep) evela kuzinhlobonhlobo zomphimbo wokusiza ekutholeni i-Group A Strep pharyngitis noma ukuqinisekiswa kwesiko. ISINGENISO I-Beta-haemolytic Group B Streptococcus iyimbangela enkulu yezifo eziphezulu zokuphefumula kubantu. Isifo esivela kakhulu kuGroup A Streptococcal yi-pharyngitis. Izimpawu zalokhu, uma kushiywe kungaphathwa ...
IStrongStep® Strep B antigen Rapid Test iyi-immunoassay ebonakalayo esheshayo yokutholwa kokuqagela okufanelekile kweQembu B iStreptococcal antigen kuswibi yabesifazane besifazane. Izinzuzo Zishesha Ngaphansi kwemizuzu engama-20 edingekayo yemiphumela. Okungangenisi Kokubili i-swab yesitho sangasese sowesifazane neyomlomo wesibeletho kulungile. Ukuvumelana nezimo Azikho izinsimbi ezikhethekile ezidingekayo. Imininingwane Yokushisa Ekamelweni Lesitoreji Ukuzwela 87.3% Okucacisiwe 99.4% Ukunemba kuka-97.5% CE kumakwe Ngosayizi WeKit = 20 kits Ifayela: Ama-Manuals / MSDS ...
UKUSETSHENZISWA OKUHLOSELWE IStrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test kuhloselwe ukuthola ukutholakala kwekhwalithi ye-Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) ama-antigen avela kuma-swabs wesitho sangasese sowesifazane. Leli khithi kuhloswe ngalo ukuthi lisetshenziswe njengosizo ekutholeni ukutheleleka kweTrichomonas. ISINGENISO Ukutheleleka kwe-Trichomonas kubhekene nesifo esithathelwana ngocansi, esingelona igciwane lesandulela ngculazi (i-vaginitis noma i-trichomoniasis) emhlabeni jikelele. I-Trichomoniasis iyimbangela ebalulekile yokugula kuzo zonke iziguli ezinegciwane ...
I-Trichomonas vaginalis ne-Candida
Isivivinyo esisheshayo seStrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida esisheshayo i-immunoassay esheshayo yokutholwa kokuqagela okufanelekile kwama-antigen ama-trichomonas vaginalis / candida albicans avela ku-swab sowesifazane sangasese. Izinzuzo zishesha kuphela imizuzu eyi-10 edingekayo. Yonga isikhathi nezindleko Ukuhlolwa okukodwa kwezifo ezimbili nge-swab eyodwa. Ukuthola ngasikhathi sinye Hlukanisa izifo ezimbili ngokugqamile. Isebenziseka kalula Yenziwe kalula futhi ihunyushwe yiwo wonke amameneli okunakekelwa kwezempilo. Igumbi lokushisa isitoreji Specif ...
Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, ICoronavirus Antigen Test Kit, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket,